Home » သတင်း » ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် Intelligent စကားစာသား, ရှာဖွေရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် Tools များ၏နယူးTranscriptive®မိသားစုသရုပ်ပြဖို့ 2019 NAB ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်; အကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်များအတွက်လက်မှတ် VFX Plugins တွေကို၏ refresh
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် Intelligent စကားစာသား, ရှာဖွေရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် Tools များ၏နယူးTranscriptive®မိသားစုသရုပ်ပြဖို့ 2019 NAB ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်; အကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်များအတွက်လက်မှတ် VFX Plugins တွေကို၏ refresh
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်တုန်ခါမှုတွေအခမဲ့၏နယူးဗားရှင်းနဲ့အတူတောင်ခန်းမ LVCC ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်; Transcriptive.com တကမ္ဘာလုံးရရှိနိုင်
ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA (မတ်လ 21, 2019) - ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် (www.digitalanarchy.com) ယနေ့က၎င်း၏အသစ်ကမှတ်တမ်း Intelligent စကားစာသား၏မိသားစု, ရှာဖွေရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိရိယာများကိုသရုပ်ပြရန်နှင့်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှုကြေညာဖို့ Las Vegas မှာလာမည့်လတွင် 2019 NAB မှပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်ထုတ်ပြန်ကြေညာ Transcriptive.com။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်လည်းတုန်ခါမှုတွေအခမဲ့သစ်ဗားရှင်းအပါအဝင်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက် VFX plugins ကို၎င်း၏လန်းဆန်းမိသားစုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တဲထဲမှာ #SL6311 အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ၏တောင်ပိုင်းခန်းမအတွက်, ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်အဖွဲ့အပါအဝင် workflow နှင့်ပူးပေါင်း tools တွေ၎င်း၏မှတ်တမ်းမိသားစုသရုပ်ပြလက်ပေါ်ပါလိမ့်မည်:
Transcriptive.com: မြန်ဆန်တိကျမှုနှင့်ရှာဖွေမှတ်တမ်းကယ်နှုတ်ကို Artificial Intelligence (AI) ကိုနှင့်သဘာမိန့်ခွန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်နှင့်အလွန်အမင်း-ချက်နဲ့မိန့်ခွန်း-to-စာသားကိုကို web service ကို။
Adobe® Premiere Pro®များအတွက် PowerSearch: Adobe Premiere Pro ကိုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့် panel ကအဖြစ်ဖွင့်လှစ်သောအစွမ်းထက် metadata ကိုရှာဖွေရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအသိဉာဏ်သစ်တစ်ခုရှာဖွေရေးစွမ်းရည်လျင်မြန်စွာ metadata ကိုတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်းကိုအပေါ်ယံအခွံနှင့်ချက်ချင်းသူတို့အား keyword ကိုရှာဖွေမှုများကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတိကျသောကလစ်များနှင့်ပာနေရာချထားရန်အယ်ဒီတာများနိုင်ပါတယ်။
Adobe Premiere Pro ကိုများအတွက်မှတ်တမ်း Plugin ကို: အထူးသအလိုအလျှောက်အလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအလွန်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှုန်းကိုအောင်မြင်ရန်မိန့်ခွန်းနှင့်သဘာဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့အင်ဂျင်ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုအားဖေါ်ထုတ်ဖို့ဒီဇိုင်းကို Adobe Premiere Pro ကိုအယ်ဒီတာများအဘို့အလိုအလြောကျ, အသိဉာဏ်ကူးယူ plugin ကို။
မှတ်တမ်းကူးယူမှတ်တမ်းတင်ဝန်ဆောင်မှု: မှတ်တမ်း AI အများနှင့်မှတ်တမ်းလူ့ကူးယူန်ဆောင်မှုကို Premiere ဘို့နှစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီး Transcriptive.com, ထိုသုံးစွဲသူများသည်အစာရှောင်ခြင်း, တိကျ AI အစာသားတွေသို့မဟုတ် 99% တိကျ transcriptionist ဖန်တီးမှတ်တမ်းများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးခြင်း။
ထို့အပြင်တစ်ဦး adjoining တဲအတွက် #SL6310, ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်အပါအဝင်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက် VFX plugins ကို၎င်း၏မိသားစုသရုပ်ပြလိမ့်မည်:
တုန်ခါမှုတွေအခမဲ့: တုန်ခါမှုတွေအခမဲ့ဗွီဒီယိုကို deflickering များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်ရဲ့အစွမ်းထက် tool တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ထပ်တူပြုခြင်း, အချိန်ချုံး, နှေးပြကွက်ဗီဒီယို, နှင့် ပို. ပို. , မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရိုက်ကူးထဲကဖြစ်ခြင်းအလင်းအိမ်နှင့်ကင်မရာများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာဘုံတုန်ခါမှုတွေပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ တုန်ခါမှုတွေအခမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကို Adobe, Adobe Premiere Pro ကို, နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကိုက X အပါအဝင်အများအပြားဗီဒီယိုတည်းဖြတ် applications များနှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ် လွန်စွာလိုလားသော, Davinci ဖြေရှင်းသို့မဟုတ်ဂတ်စ်။
အလှအပ Box ကို: အလိုအလြောကျအသားအရေတန်ချိန်သတ်မှတ့်အရေပြားဒေသများသို့ချောအကျိုးသက်ရောက်မှုကန့်သတ်မယ့်မျက်နှာဖုံးဖန်တီးသော VFX plugin ကို။ ရိုးရှင်းစွာ filter ကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, အလှအပ Box ကိုဗီဒီယိုလေ့လာဆန်းစစ်အနည်းငယ်တင်ပါသည် options များသတ်မှတ်နှင့်အသားအရေ retouching မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူအောင်ပြန်ဆို။ အဆိုပါအလှအပ Box ကိုဗီဒီယိုအသားအရေ retouching plugin ကို State-Of-The-Art မျက်နှာနှင့်အသားအရေထောက်လှမ်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့် algorithms ချောမွေ့ခြင်းဖြင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ်ကပ်ဆောင်ရွက်သည်။
ဗီဒီယိုများအတွက်ဆာမူရိုင်း Sharpen: သက်ရောက်မှုနှင့် Premiere Pro ကိုအယ်ဒီတာများနှင့်အနုပညာရှင်များ၏ပြီးနောက် FCPX နှင့်ကို Adobe များအတွက်တစ်အသိဉာဏ်ကိုဗီဒီယိုသွေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဗီဒီယိုများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်ဆာမူရိုင်း Sharpen အတူလုပ်ကိုင်အသုံးပြုသူများကိုပေးစေခြင်းငှါစွန်-သတိထားအသိဉာဏ် algorithms ၏နံပါတ်တစ်ခုကိုပြတ်သားဆော့ဖျဝဲအဖြစ် GPU ကိုအရှိန်ဖြစ်ပါသည် HD နှင့် 4K ရိုက်ကူးမကြုံစဖူးပုံရိပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု။
အဆိုပါပူးတွဲဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်နှင့် Transcriptive.com သစ်ခက်တဲတောင်ခန်းမ, LVCC အတွက် Adobe ကတဲကနေတိုက်ရိုက်အတန်းမှာအနှံ့တည်ရှိနေကြသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်, content တွေကိုဖန်တီးသူများအတွက် VFX plugins ကို၎င်း၏မိသားစုနှင့် Intelligent စကားစာသား၎င်း၏မိသားစု, ရှာရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိရိယာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.digitalanarchy.com.
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်ကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများ, ထုတ်လွှင့်ဒီဇိုင်နာများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်စမတ် image ကိုတိုးမြှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖန်တီးပေးကြောင်းဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA အတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်ကိုလည်းအသိဉာဏ်မှတ်တမ်း, ပူးပေါင်းဆောင်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုဦးတည်ချက်အတုလုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်တမ်း Suite ၏နိဒါန်းနှင့်တကွ, ကုမ္ပဏီဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်နှင့်ရိုးရှင်းဖို့ကို Artificial Intelligence, စက်သင်ယူမှုနှင့် metadata ကိုအသုံးပြုတဲ့အပြည့်အဝ-ပေါင်းစည်းထုတ်ကုန်မိသားစုကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏နည်းဗျူဟာသဘောပေါက်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www.digitalanarchy.com မှာကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ် 415-287-6069 မခေါ်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်နှင့်မှတ်တမ်းဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် Inc ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အမည်များ, ထုတ်ကုန်အမည်များ, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ဒါမှမဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုင်ဆောင်သူပိုင်နေကြသည်.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida DigitalAnarchy တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor NAB2019 SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-03-22
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် Transcriptive.com အတွက် Beta အစီအစဉ်တွေကိုဖြည့်ရန်, NAB 2019 မှာဂလိုဘယ်ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: 2019 #NABShow ပြသခဲ့သည် Spotlight ကို: Plura အသံလွှင့်